Iyo iPhone ine Bata ID pasi pechidzitiro ichanonoka makore akati wandei | Nhau dze iPhone
Ngirozi Gonzalez | 31/03/2022 14:00 | Noticias, IPhone Zviteshi
ari iPhone 14 Vachaona chiedza chaGunyana anotevera. Kunyangwe kuchine mwedzi yakawanda kuti iende, runyerekupe pamusoro penhau uye dhizaini shanduko yechigadzirwa chitsva iri kutanga kubuda pamanetiweki. Mazhinji aive manzwi aitungamira iPhone 14 ine yakabatanidzwa Face ID pasi pechidzitiro. Zvisinei, zvinoratidzika kuti hazvizobatanidzwa pasi pechidzitiro, asi notch ichabviswa kuti iswedere dhizaini yakafanana ne "piritsi". Makuhwa akanongedzawo kudzoka kweTouch ID yakabatanidzwa pasi pechidzitiro, asi ongororo yakabudiswa naMing Chi-Kuo inovimbisa izvozvo tichafanirwa kumirira makore akati wandei kuti tione tekinoroji iyi.
Mufaro wedu mutsime: iyo Bata ID pasi pechidzitiro che iPhone ichanonoka
Nhau dzakati wandei dzakaburitswa mwedzi mishoma yapfuura dzaiti Apple yakaedza nhevedzano yeprototypes ne Bata ID yakabatanidzwa pasi pechidzitiro. Izvi zvaive zvakakosha nekuda kwemamiriro edenda ataive maive umo Face ID yaive isingaite zvachose. Nekudaro, ivo vakafunga kurasa zano, zvakanyanya nekuti vaiyedza kuvandudza iyo Face ID algorithm kuti ikwanise kuvhura iyo terminal kunyangwe nemask. Uye ndizvo zvazvaive, nekuburitswa kweiOS 15.4.
Runyerekupe rwakaenderera mberi ndokunongedza ku iPhone 14 ine Face ID uye Bata ID yakabatanidzwa pasi pechidzitiro. Asi Ming Chi Kuo, muongorori anozivikanwa wepasirese weApple, akaburitsa tweet apo anovimbisa izvozvo tekinoroji iyi haizoonekwe muna 2023 kana 2024, Kanenge sekuronga. Izvi zvinoshandura kufanotaura kwaKuo kuti Apple yaida kuburitsa chigadzirwa neTouch ID pasi pechidzitiro muna 2023.
Ini ndakambofanotaura kuti maPhones aizotsigira pasi-kuratidza zvigunwe zvekunzwa / Bata ID muna 2023 pakutanga. Asi ongororo yazvino inoratidza maPhones matsva muna 2023 & 2024 anogona kusatora pasi-kuratidza Kubata ID. Face ID ine mask pa iPhone yatove yakakura biometric mhinduro.
— Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) March 30, 2022
Iyo iPhone 15 Pro ichave neFace ID yakavanzwa pasi pechidzitiro
Izvi hazvireve kuti Apple inosiya chirongwa ichi kumashure. Asi mamwe mabasa anenge akunda, sekutsvaga nzira yekuenda bvisa zvachose notch yekubatanidza Face ID pasi pechidzitiro. Uye zvakare, isu hatigone kukanganwa kuti iyo iPad Air, semuenzaniso, ine Bata ID pane yekukiya bhatani uye hazvingave zvisina musoro kufunga kuti Apple ingave inofarira kudzosera sensor yeminwe ku iPhone munzvimbo iyi. Tichafanirwa kumirira kusvika munaGunyana kuti tione zvatakagadzirirwa neApple neiyo iPhone 14!
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » MaPhones ane Touch ID pasi pechidzitiro anozononoka makore akati wandei
Podcast 13x26: Vhiki yeOscar